Na tsara na ratsy ny — ny vehivavy tsirairay dia manana ny heviny momba ny Tratrany. Raha toa ka ny karazana vehivavy toy ny Nono, dia afaka diniho ny tenanao tsara vintana, satria lehibe ohatry (isan-jato) no manana zavatra tsy mety ny nono. Ao amin’ny dingana, ny Nono, na inona na inona ny habeny, tena mahagaga ny natiora. Tsindrio eto mba hamaky ny mampientam-po ny zava-misy momba ny vavy tratra.»Ankoatra ny olombelona, tsy misy hafa Primate manana Nono tanteraka», hoy ny manam-pahaizana mino ny evolisiona, Carole Jähem ao amin’ny»the Guardian Ao ny raharaha ny non-human rajako (sy ireo biby mampinono) feno nono dia porofo mazava fa ny vehivavy dia ny fampinonoana. Tsy mba toy izany ny olona.»Nahoana no toy izany hatreto, tsy nanala. Ny foto-pisainana mitory ny hoe ny olombelona Nono manana ny sanda ara-pananahana dia midika amin’ny lahatsoratra tsotra: ianao no tokony hanentana. Araka ny Guinness world records bokin’i Annie Hawkins-Turner dia manana ny lehibe indrindra ara-boajanahary Nono eo amin’izao tontolo izao. Izy dia vata circumference ny santimetatra. Ny Bras mila mividy azy ireo amin’ny haben’ny ZZZ. Ny vehivavy afaka ny ho tonga amin’ny alalan’ny rehefa Tairina ny mamelon dia manomboka mitranga any amin’ny fara tampony — izany dia voaporofo ara-tsiansa. Ao amin’ny fanadihadiana ny gazety»ny Olona ny ara-Pahasalamana», hoy isan-jato ny vehivavy nanadihady, fa izy ireo dia nanana»tratra levitra». Ny rononon-dreny no»tonga lafatra sakafo»ho an’ny zaza. Ny world health organization (WHO), hoy. Izany dia noho ny ronono ahitana hery fiarovana izay hiarovana ny zaza manohitra ny aretina sy ny aretina.
Photo Gallery, Fito dingana mahavariana ny Firaisana ara-nofo lake Gallery mahagaga ny zava-misy ara-tsiansa momba ny Nono Fito dingana mahavariana ny Firaisana ara-nofo. Ny Fampinonoana, tsy Anjara, na ny reniny dia manana kely na lehibe Nono. Raha misy matetika ny vehivavy kely iray Kaopy ny habeny, ny tahotra fa tsy afaka nono-fahana ny zanany, dia ny fahamarinana, ny vehivavy be Nono izay manana olana amin’ny Fampinonoana. Ianao tsy afa-po amin’ny Kapoaky ny habeny.
Miandry anao kely
Amin’ny Nono ny vehivavy maro mba hitombo izy na dia taoriana ny Tanora taona. Koa mandritra ny firaisana ara-nofo arousal, ny vehivavy ny Nono dia afaka mitombo araka ny manam-pahaizana mba isan-jato. Izany dia tanteraka ara-dalàna, fa vehivavy roa samy hafa salantsalany Nono. Amin’ny isan-jato ny vehivavy rehetra, ny nono ankavia dia fomba lehibe kokoa noho ny tsara, manoratra ny mpanoratra, Jenna Picot. Nahoana no izany, ireo mpikaroka ireo dia tsy afaka ny hanazava. Pinots kevitra dia ny hoe ny vehivavy maro ny fampinonoana ny nono ankavia, mba manana zo Tanana maimaim-poana. Izany no mahatonga ny vatana mba hamokatra bebe kokoa ny ronono noho ny nono ankavia. Mino ve ianao fa tsy misy afa-tsy ny nonon’ny-bika. Avy eo dia manaraka izany dia goavana.»Ara-dalàna»nipples protrude ny Mm avy ny nahitana aretin-koditra atrial avy ao amin’ny hatsiaka sy ny firaisana ara-nofo arousal. Fisaka nipples protrude afa-tsy raha izany no mangatsiaka na rehefa mandrisika.»Basy»nipples manana nanangana areola, sy ny»fivadihan’ny»nipples no nitarika ny ao anatiny. Ny tena lahatsoratra sy ny Bilaogy mba handray lahatsoratra isan’andro amin’ny alalan’ny mailaka. Ny Gazety dia mety ahitana manokana Votoaty sy ny dokam-barotra.
← Webcam Chat tsara indrindra Mampiaraka ny vavahadin-tserasera amin'ny tontolo Mampiaraka Toerana
Libra ny olona ho amin'ny fandresena isika - Video Mampiaraka USA →